पुलिस र टिप टप सुपर-८को सेमिफाइनलमा | Hamro Khelkud
पुलिस र टिप टप सुपर-८को सेमिफाइनलमा
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – किर्तिपुरस्थित टि.यु. अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारि देभिवास खुकुरी सुपर-८ क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण आज पुरा भएको छ।
समूह चरणको सम्पूर्ण खेलहरुको समापन संगै दुइ समूहमा रहेका शीर्ष २ टोलीले सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेका छन्। समूह ‘ए’ बाट टिप टप समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गर्यो भने नेपाल पुलिस क्लबले समूह ‘बि’को सबै खेल जित्दै शीर्षस्थानमा रह्यो। पुलिसले समुह ‘ए’को उपविजेता स्टर्म ब्र्यान्ड एक्टिभेसनको सामना गर्नेछ भने टिप टपले नागर्जुना क्रिकेट क्लबको चुनौती स्वीकार्नेछ।
आज भएको पहिलो खेलमा स्टर्म ब्र्यान्ड एक्टिभेसनले डी.ए.भीलाइ ७ विकेटले पराजित गरेको थियो। दिनको दोश्रो खेलमा मन्जित श्रेष्ठ र कुशल भुर्तेलको आक्रामक इनिङ्सको मद्दतले नेपाल पुलिस क्लबले के.बि.एचलाई ७० रानको विशाल अन्तरले पराजित गर्यो।
एनएसजेएफले स्टर्म ब्र्यान्ड एक्टिभेसनसंग ८ विकेटको पराजय बेहोर्दा पुलिसले नागर्जुनालाई २५ रनले हराएको थियो। सोनु तामाङको आक्रामक ब्याटिङको मद्दतले टिप टपले डी.ए.भी.लाई ३ रनले हरायो। ९४ रनको लक्ष्य पछ्याएको डी.ए.भी.का लागि जितेन्द्र ठकुरी ३५(१५) र हिमांशु दत्त ३५(१२)को प्रदर्शन खेर गएको थियो। दिनको अन्तिम खेलमा डी.ए.भी.ले भी.एम. वारियार्सलाई १५ रनले पराजित गर्यो।
प्रतियोगिताको फाइनल र सेमिफाइनल खेलहरु शनिबार खेलिनेछ।